သင်၏စစ်မျက်နှာကိုတင်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 20, 2008 တနင်္ဂနွေ, မေလ 29, 2016 Douglas Karr
အရောင်းဝန်ထမ်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာစပ်ကြားခြားနားချက်ရှိသည်။ ငါကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်တယ် အရောင်းစာရေးဒါပေမယ့်ကြောက်မက်ဘွယ်သော ပိုမိုနီးကပ်စွာ။ ငါကြီးမားသောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများစွာကိုရောင်းပြီးပြီဆိုတာသိပေမယ့်ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှမတွန်းအားပေးခဲ့ဘူး မင် (စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး) ။ ငါစာချုပ်အရွယ်အစားပြန်တွန်းအားပေးသို့မဟုတ်အစောပိုင်းကလက်မှတ်ထိုးရန်အလားအလာများအတွက်ဖိအားလျှောက်ထားခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာပဲ၊ ကျွန်တော့်အလုပ်မှာဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုသဘောကျတဲ့အရည်အချင်းရှိသူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပိတ်သူများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျင်မြန်စွာအသိအမှတ်ပြုပြီး၊ ရောင်းချခြင်းကိုပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သောဖိအားကိုပေးနိုင်သည်။ ဒါကကိုင်တွယ်ပုံရသလိုပဲ - တကယ်လို့ငါတို့ဖောက်သည်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတကယ်ပြောင်းလဲပစ်တယ်လို့မထင်ဘူးဆိုရင်ငါသဘောတူတယ်။
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများလေလေ၊ စတင်လေလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရလေလေဖြစ်တယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သေးငယ်သောဖောက်သည်များသည်အာရုံစူးစိုက်မှုအများဆုံးရရန်နှင့်ရလဒ်များကိုမကြာမီမလာကြပါ။ ဖောက်သည်ကြီးတစ် ဦး သည်တန်ဖိုးကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၏အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ယခုနှစ်တွင်ပိတ်ရန်ဒေါ်လာများရှိသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်စိန်ခေါ်ခံရသည်၊ သို့သော်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်အကုန်အကျများမည်မဟုတ်ဘဲဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းထက်ကြီးထွားမှုအတွက်အန္တာရာယ်ရှိမည်မဟုတ်။
သင်တစ် ဦး လိုအပ်သည့်အခါဤသည် ပိုမိုနီးကပ်စွာ။ တစ် ဦး ပိုမိုနီးကပ်စွာမထားဘူး စျေးနှုန်းများခုတ် ရောင်းရဖို့သူတို့ဝတ်ကြတယ် စစ်မျက်နှာ နှင့်ရောင်းချမှုကိုပိတ်ဖို့ရန်အလားအလာကိုစိန်ခေါ်။
ယခုအပတ်ငါအရေးယူအတွက်မြင်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းမှလုံးဝအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့်အလားအလာကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လက်မှတ်ထိုးရန်သူတို့၏ခြေကိုဆွဲနေကြသည်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည်၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်သည်သူတို့၏အခြားကြိုးပမ်းမှုများထက်အကြိမ်များစွာပိုများသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုမိုနီးကပ်စွာသည်သူ၏အပေါ်တင် စစ်မျက်နှာ စစ်တိုက်သွားလေ၏။ သူသည်သူတို့၏လက်ရှိမဟာဗျူဟာကိုသုတေသနပြုခဲ့ပြီးရလဒ်နှင့်ရလဒ်များမရှိသောမဟာဗျူဟာတစ်ခုတွင်၎င်းတို့သည်အချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်သည့်အလားအလာကိုသတိပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုနီးကပ်စွာစကားဝိုင်းကမှန်ကန်သောမေးခွန်းနှင့်“ သင်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်နည်းဗျူဟာကိုဆက်လုပ်လိုပါသလား၊ သို့မဟုတ်ငါတို့နှင့်အနိုင်ရသောမဟာဗျူဟာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသလား” ဟူ၍ မေးခဲ့သည်။ ပိတ်ပါ
ကြမ်းတမ်းသောအသံများဖြစ်သော်လည်းဤခက်ခဲသောအချိန်များဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ ၂၀၀၈ ဘတ်ဂျက်များကိုယခုအချိန်တွင်ယိုယွင်းနေသောကြောင့်သင်ရောင်းအားသည်သင့်လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုသည်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။
၂၀၀၉ မှာမင်းရဲ့စစ်ပွဲကိုပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တည်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဘတ်ဂျက်ဒေါ်လာတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ်။ အရောင်းဝန်ထမ်းများမဟုတ်ဘဲအနီးကပ်နီးစပ်သူများကိုငှားရမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများ၏စွမ်းရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုအားယခုအချိန်တွင်တွန်းပို့နေသည့်အရာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်တိုးတက်မှုရှိစေမည်။
Google Cookie ပြိုနေပြီလား
ဒီဇင်ဘာ 22, 2008 မှာ 12: 38 AM
ဖောက်သည်များကိုကြောက်လန့်စေမည့်စစ်မျက်နှာနှင့်ဆန့်ကျင်။ ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာကိုပိုမိုနီးကပ်စွာထားခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ ပိတ်ခြင်းသည်ဖောက်သည်အတွက်နာကျင်စရာမလိုပါ။
ဒီဇင်ဘာ 22, 2008 မှာ 12: 49 AM
ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ SBM မှရောင်းချခြင်းကိုမပိတ်နိုင်ပါ။ ငါအလားအလာကိုကြောက်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်။
အဲဒီအစားသူတို့ကိုငါစိတ်ချစေချင်တယ်။ ဤစီးပွားရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသောပြproblemနာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ရှေ့တိုးရန်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည့်တိုင်စီးပွားရေးကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ ရောင်းအားသည်ထိုကြောက်ရွံ့မှုကိုတွန်းလှန်ရမည်။
22:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 04 တွင်
Gosh တစ်စုံတစ်ယောက်က REAL ကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးအကြောင်းပြောတာကိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ငါကြားသမျှအားလုံးသည် Twitter ဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှာ FriendFeed ဖြစ်သည်၊ လူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုခဏအနားပေးပါ။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်အများစုသည်တွစ်တာနှင့်သိပ်အလုပ်များလွန်းကြပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းရန်ရှိသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သင်တစ် ဦး မှတစ်စသို့အကူးအပြောင်းကိုနားလည်ရန်လိုသည်။ ၎င်းတွင်ပိတ်ခြင်း၊ မကြောက်ပါနဲ့ သတိရပါ၊ သူတို့ပြောနိုင်သမျှအဆိုးဆုံးကတော့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါက YES နဲ့မနီးမဝေးပဲ !!!!
22:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 28 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Preston! သင်မှန်ပါသည်၊ ၎င်းသည်သင်၏လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။
22:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 08 တွင်
Seth Godin အပါအ ၀ င်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဂိုဏ်းအားလုံးကိုကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကသင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ရောက်ရှိရန်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ အခုနင့်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပါရစေငါနယူးယောက်မှာရှိတဲ့ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ ၁၇ နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်ကပိုက်ဆံစုဆောင်းပြီးစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုသန်းပေါင်းများစွာကိုနည်းလမ်းနှစ်ခုဖြင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အိမ်ရှင်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အများပိုင်ကုမ္ပဏီများမှအအေးခန်းခေါ်ယူခြင်း။ ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးအကောင့်မှာ ၄၅ သန်းဖြစ်ပြီးနောက်တာပါ။ အခုငါ့မှာ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိတယ်။ ဆိုက်တွေကိုဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နဲ့အထက်ကုန်ကျတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်အားအထောက်အကူပြုမည့်အကြံဥာဏ်ကဘာလဲ။ ငါကလစ်တစ်ချက်ကိုပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ လူမှုမီဒီယာကွန်ယက်…ဟုတ်တယ်၊ ငါ G (Guru to Guru) ကို G လို့ခေါ်လိုက်တာပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးခေါ်ဆိုမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အားလုံးနီးပါးကိုပါးစပ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်းမှလွဲစေသည်။ ငါ့ကိုအသစ်နှင့်လတ်ဆတ်တဲ့ slant ပေးပါ။
22:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 14 တွင်
အိုး၊ ကျေးဇူးပြု၍“ သူတို့ရဲ့” စာလုံးပေါင်းကို…အဲဒီမှာဖြစ်သင့်လား။